သတင်း - အမြန်သန့်ရှင်းရေး Rotary Air လော့ခ်အဆို့ရှင်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
စိုးနှင့်အတူ နှစ် 20 နီးပါး. လုပ်ငန်းအတွက်ပြည်တွင်းဈေးကွက်ရော ပြည်ပဈေးကွက်ရော, သူတို့ စကားလုံးတွေလား။’s အမြန်ရွေ့လျားနေသော မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်းနှင့် ဘီစကွတ်ကုမ္ပဏီတွင် အကြီးဆုံးအိုင်ဒီယာ. စျေးကွက်တွင် ကုန်ပစ္စည်း 15 ခုကျော်ကို ကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီသည် သန်းနှင့်ချီသော စားသုံးသူများ၏ နေ့စဉ်ဘဝ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ကမ္ဘာ. ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုနှင့် ဆက်စပ်ခွင့်ရသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူပါသည်။ ZILI အပြုသဘောဆောင်သောလူမှုရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖန်တီးခဲ့သည်။
Bakery Industries တွင် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုသည် အရေးကြီးပြီး ပါဝင်သောပစ္စည်းများကို မကြာခဏ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏စိန်ခေါ်မှုမှာ မတူညီပါ။ မကြာခဏဖယ်ရှားရန် rotary valve ၏ disengagement သည် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းချိန်သည် ၁.၅ နာရီအထိကြာမြင့်သည်။2နာရီအထိ။ rotary valve ၏ မကြာခဏ ထိတွေ့မှုနှင့် ကွဲထွက်မှုသည် ရိုးတံ၏ ဖျံများ၏ သက်တမ်းကို ပိုတိုစေသောကြောင့် rotary valve ကိုယ်တိုင် ပုံမှန် အစားထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။
သန့်ရှင်းရေး/တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှု ဒီဇိုင်းဖြင့် အမြန်သန့်ရှင်းသော Valve သည် ပိုက်ခေါင်းအောက် တပ်ဆင်ရန် တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ SS 304 တွင် ပေးထားသည့် ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။
Bakery လုပ်ငန်းများတွင် ထုတ်ကုန်များသည် အဓိကအားဖြင့် အခြောက်မှုန့် သို့မဟုတ် အမှုန့်ပုံစံဖြစ်သည်။ rotary airlock valve ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ကောင်းမွန်သောလော့ခ်အခြေအနေတစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းထားရန်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့်၊ downstream နှင့် upstream pressure/vacuum transfer ကို သီးခြားခွဲထားရန်ဖြစ်သည်။
အမြန်သန့်ရှင်းရေး Rotary Valve သည် မကြာခဏ သန့်ရှင်းရေးလိုအပ်သော ညစ်ညမ်းမှု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထိခိုက်လွယ်သော အပလီကေးရှင်းများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည် စနစ်မှ rotary valve ကိုဖြုတ်ရန်မလိုအပ်ဘဲ အမြန်သန့်ရှင်းရေးအတွက် rotor နှင့် အတွင်းမျက်နှာပြင်များကို လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်နိုင်သည်။
လျင်မြန်သောသန့်ရှင်းသော rotary valves များကို packing gland ကိုမဖယ်ရှားဘဲ rotor ၏ဖယ်ရှားခြင်းကိုခွင့်ပြုပြီး valve clean up အတွက် စက်ရပ်ချိန်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ မည်သည့်ကိရိယာမှမလိုအပ်ဘဲ disassembly နှင့် reassembly ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ valve ရှိ purging အစီအစဉ်သည် shaft seals များ၏သက်တမ်းကို တိုးတက်စေသည်။
rotary valve, လော့ခ် အဆို့ရှင်, 3-Way Diverter Valve, Electronic Control Valve, rotary feeder,3Way Ball Valve,